You are here: Home somal Sanad wacan oo wanaagsan idilkeenba
Waxaan leenahay sanadkan Alle ha inooga dhigo kii aad ku barwaaqowno, Nabad iyo Caano leh.
Waxaan duco iyo dardaaran hawada u marninaynaa dhalinyarada meelkasta oo ay joogaan. Waxaan leenahay wadankiina aamina ha la noqdo kuwo iyaga loo soo hiloobo. Inta maqana waxaan leenahay wadan shisheeya ayaad joogtaan wadankiina hooyo ha ilaawin isagaa raasamaal idiin ah.
Waxaan kale oo Bahda Ciyaaraha gaar ahaa kuwa reer soomaalinad leeyahay inshaa allaahu sanadkani wuxuu noqon doonaa mid ka duwan kuwii hore, yaan la niyad jabin horumarku maalin iyo labo toona kuma yimaado. Waynu gaadhi maalin dhaw halka aynu higsanayno…..